Villa Somalia oo war kasoo saartay kulankii maanta iyo qodobadii looga hadlay. uu madaxweynaha si gaar ah usoo qaaday + Sawirro | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Villa Somalia oo war kasoo saartay kulankii maanta iyo qodobadii looga hadlay....
Villa Somalia oo war kasoo saartay kulankii maanta iyo qodobadii looga hadlay. uu madaxweynaha si gaar ah usoo qaaday + Sawirro
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war rasmi ah kasoo saartay furitaanka Shirka Wadatashiga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada oo Maanta si rasmi ah uga furmay Xarunta Madaxtooyada Qaranka.
“Madaxtooyada Qaranka waxa ay soo dhaweynaysaa sida Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ay uga dadaaleen ka soo qeybgalka Shirkan, iyadoo haatan loo dhan yahay kamira-dhalinta Shirkan oo muhiim u ah hirgelinta doorashada dalka,” ayuu yiri Cabdirashiid.
Qoraalka kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegau Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu furitaanka Shirka ka hor kulamo hordhac ah la qaatay Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaaadir, isaga oo qodob gaar ah diiradda saaray oo uu kala hadlay.
“Kulamadaas ayaa ku saabsanaa sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen xuquuqdooda Dastuuriga ah ee ku aaddan in ay doortaan mas’uuliyiinta ay ku aaminayaan talada dalka,” ayaa lagu yiri qoraalka Villa Somalia.
Hadalkan ayaa laga dhadhasan karaa in macnihiisu yahay in shacabka codeeyaan, oo ay helaan awood ay ku doortaan kuwa matalaya, taasi oo madaxweynaha marar badan uu dalbaday.
Previous articleSilvia Romano oo Al-Shabaab horay u afduubeen oo loo magacaabay danjiraha qaaradda Yurub ee la dagaalanka Islaam Naceybka
Next articleHaweeney u dhalatay dalka Slovenia gacanteeda isaga goysay si ay uga taajirto
Madaxweyne Farmaajo oo Xil sare Magacaabay